Fitokonana tany Toamasina :: Naparitaka tamin’ny baomba mandatsadranomaso ireo mpitarika posy • AoRaha
Fitokonana tany Toamasina Naparitaka tamin’ny baomba mandatsadranomaso ireo mpitarika posy
Nilahatra teny an-dalambe, tany Toamasina, ireo mpitarika posy, omaly, noho ny fandrarana azy ireo amin’ny asany sy ny tsy fahazoana vola fanampiana avy amin’ny fitondrana, amin’izao fotoana fihibohana vokatry ny aretina “Coronavirus” izao. Nifampitana tamin’ny mpitandro ny filaminana izy ireo ka voatery naparitaka tamin’ny baomba mandatsa-dranomaso. Tsy nisy ny olona naratra na namoy ny ainy. Nilamina ny raharaha, ny antoandro. Nidina haingana any an-toerana ny Praiminisitra sy ny ministry ny Fiarovampirenena hifampiresaka amin’ ireo mpitarika posy ireo.
Nanomboka tamin’ny 9 ora maraina teo ho eo no nitangorona ireo andiana mpitarika posy, tany Toamasina. Nandeha teny amin’ny arabe tany Morarano sy teo amin’ny tetezan’i Tanambao Verrerie izy ireo. Tonga haingana ny polisy sy ny zandary.
“Nitora-bato ireo mpitondra posy. Nisy mihitsy ny saika nandroba magazay. Tsy maintsy nanapoahana baomba mandatsa-dranomaso ny fanaparitahana azy ireo. Rava ny korontana, tamin’ny 12 ora antoandro”, araka ny fampitambaovao avy amin’ny mpitandro ny filaminana any Toamasina.
Ahiahy firaisana tsikombakomba Vadina mpiandry fonja saika matin’ny fokonolona
Asa ratsy teto an-drenivohitra Am-polony ireo vono olona sy fanafihana tao anatin’ny telo volana
Fisorohana fivorivoriana Andiana mpilalao baolina noravàn’ny polisy
Razana tetsy Ambohimirary Fatim-behivavy tombanana ho lanin’ny biby
Loza an-dranomamy :: Namoy ny ainy avokoa ireo telo mianaka navadiky ny lakana
Fanelezana vaovao tsy marina :: Tambazana dimy tapitrisa ariary ny fikarohana vehivavy iray